သားတို့ ကစားနေတဲ့ ကွန်ပြူတာဂိမ်းတွေ…ကလေးတွေ စွဲတာမပြောပါနဲ့ ကောင်းတာကို လို့ ဘေးကထိုင်ကြည့်နေရင်း
သူ့အဖေက “ဟုတ်တယ်…တော်တော် အချိန်တွေ ပေးပြီးလုပ်ထားရမှာ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ကလုပ်ပြီးသား အခံပေါ်မှာ ဆက်လုပ်သွားရတာပေါ့လေ…အစက စ,ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်လွယ်မလဲ
Leverage. လုပ်သွားရတာပေါ့…” တဲ့
“အဲ့ဒီအကြောင်း နည်းနည်းရေးပေး…” ဆိုတော့
ပညာဆိုတာမျိုးက ရသမျှ တစတစ စုယူရတာ။ စုတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာတောင်မှပဲ မိဘအမွေရတဲ့သူများဟာ မိဘအမွေမရဘဲ အစကနေစပြီး စီးပွားရှာရသူတွေနဲ့တော့ မတူပါဘူး။ ဒီလိုပဲ … မျိုးဆက်သစ်တွေက မိဘဘိုးဘွားတွေဆီက ပညာအမွေအနှစ်တွေကို လက်ခံမယူခဲ့ရင် အစကပြန်ပြန် စ နေရရင် အတော်နဲ့ ရှေ့တတ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
တခါက Newton ကို လူတွေက ချီးမွမ်းတော့ သူ့အရင်က ဆရာကြီးတွေရဲ့ ပုခုံးပေါ်ကတက်ကြည့်လို့ သူဝေးဝေး မြင်နိုင်တာပါလို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ် (Copernicus, Kepler နဲ့ Galileo တို့သုံးဦးကို ဆိုလိုပါတယ်)။ ပညာသင်ကြားခြင်းဟာ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေဆီက အသိပညာတွေ အတွေ့အကြုံကို ယူလိုက်နိုင်မှ ပိုပြီး ရှေ့ရောက်နိုင်ပါတယ်။ နောက် Einstein ကလည်း Newton တို့ရဲ့ ပခုံးပေါ်က တက်ကြည့်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ ဒီနောက် Stephen Hawking လည်း ဒီလိုပါဘဲ။ သူက ဟိုး… Copernicus က စလို့ Newton, Einstein တို့ထိ ရေးခဲ့, တွက်ခဲ့ကြတာတွေကို ပြန်စုပြီး “On the shoulder of Giants” ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးတယ်။ ဒီဘိုးတော်ကြီးတွေက အလကားပါ… “ကမ္ဘာက နေကို ပတ်တာ, ပန်းသီးကြွေတာ ကမ္ဘာက ဆွဲလို့” ဆိုတာလောက်ပဲ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်ပြောနေခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ ငါ့လောက် မသိခဲ့ကြရှာဘူးလို့ သဘောမထားဘဲ၊ ငါသူတို့ ပခုံးတွေပေါ်က ကြည့်ခဲ့လို့ ပိုမြင်တယ်လို့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တလေးတစား အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ စာအုပ်ထုတ်တာပေါ့။ မျိုးဆက်သစ် ရူပဗေဒပညာရှင် တစ်ဦးက ဘိုးဘွားဘီဘင်တို့အပေါ် ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းလို့လည်း ဆိုကောင်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ DVDကို ကိုဧရာ့သူငယ်ချင်းက လက်ဆင့်ကမ်းလို့ ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ ဆရာမ ဂျူးရဲ့ ကဏ္ဍမှာ ဆရာမက…
ပညာသင်ကြားရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၅ခုကို အတိုချုပ် ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
၁။ Education means career. ဘ၀နောင်ရေး စိတ်အေးရမည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာ
၂။ Education teaches how to think. တွေးဆ မျှော်မြင်တတ်တဲ့ အတတ်ကို ရလာအောင် သင်ကြားပေးသည်။
၃။ Education transmits civilization. လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာအောင် မျိုးဆက်တခုမှ တခုသို့ ဆင့်ကဲ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပေါင်းစီး ပေးသည့်အရာ ဖြစ်သည်။
၄။ Education liberates individuals. ပညာသည် လူတဦးချင်းစီကို လွတ်မြောက်စေသည့် တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုကို ပေးနိုင်သည်။
၅။ Education teaches morality. လူကျင့်ဝတ်သိက္ခာ၊ ကိုယ်ကျင့်သီလကို ပညာက သင်ပေးသည်။
ပြောပြရဦးမည့် အဖြစ်တွေ... ဆိုပြီး မသီတာ ပညာတွေသင်ပြီး အသုံးမချနိုင်လို့ ငြီးတဲ့ပို့စ်ရေးတော့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းအားပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မသီတာ အလုပ်မရှိလို့ လူရာမ၀င်မှာထက်၊ ပညာကို အသုံးမချနိုင်လို့ ဆရာမဂျူး ပြောသွားတဲ့ နံပါတ်(၃) အချက်က အုတ်တချပ်၊ သဲတပွင့်တွေ လျော့လျော့သွားမှာ စိုးတာပါ...
Labels: ပညာရေး, သီတာ, ဧရာသီတာ
Education နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေးဆစရာ ပို့စ်ကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ မမ။
(မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်အကြောင်းကို တွေးမိရင်း ရင်မောသွားတယ်။ ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရမယ့် အရာတွေထဲ ပညာရေးစနစ်က ထိပ်ဆုံးကနေ အခြေခံကျကျ အရေးပါနေတယ်နော်။)
စတီဖင်ဟော့ကင်း စာအုပ်ကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားလို့ ဝယ်ဖို့ မှတ်ထားလိုက်ပြီ။ ကျေးဇူးပါ ကိုဧရာနဲ့ မမသီတာ။း)
ဒီ post ကို ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က တွေးခဲ့မိတာလေး တစ်ခုကို သတိရမိပါတယ်။
ကျောင်းမှာ C & C++ စသင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း အစမှာ ဘာတွေမှန်းမှ မသိကြဘူး။ ပထမဆုံး စသင်တဲ့ ဆရာက ဗမာပြည်အကြိုက်နဲ့ ပြောရရင် အသင်အပြ ကောင်းသူ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ လုံးချာလည်ပြီး နောက်တတန်း တက်လာကြပါတယ်။ နောက်တတန်းမှာ သင်တဲ့ဆရာကတော့ IT ကပါ။ (ရှေ့တတန်းက ဆရာက major (EC) က ဆရာပါ) ကျွန်မ တဦးတည်းအမြင်ပြောရရင် အဲဒီ ဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပထမဆရာဟာ နောက် IT ဆရာနဲ့ ယှဉ်လို့ရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ IT က ဆရာကတော့ IT ကမို့ ပညာရပ်ပိုင်း emphasize ပိုလုပ်ရတော့ ပိုတာတော့ ရှိမှာပါ။ ဒါ့ပြင် IT ဆရာက အသင်အပြမှာ သိသိသာသာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ကျွန်မတို့တွေ နောက်တနှစ်မှာ အဲဒီ ဘာသာကို ပိုပြီး နားလည်လာကြတယ်။ ပထမတော့ IT ဘာသာမို့ နောက် အသင်အပြလည်းကောင်းလို့ IT ဆရာသင်တော့မှပဲ ပိုနားလည်တယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ တော်တော်များများလည်း ကျွန်မလိုပဲ ထင်ကြမယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားရင်း တွေးရင်း၊ စာလုပ်ရင်းနဲ့ တွေးမိလာတာ တစ်ခုက နောက်ပိုင်း ပိုသိလာ ပိုနားလည်လာတယ်ဆိုတာ ရှေ့ပိုင်းက အသိပေါ်ကနေ တဆင့် တက်ကြည့်မိကြလို့ ပိုလွယ်နေတာပါလို့ တွေးမိခဲ့ရတယ်။
နောက်ပိုင်းဆရာ ကောင်းတာလဲ ကောင်းတာပဲဖြစ်ပေမယ့် ရှေ့က ဆရာ ပြောပြထားတဲ့ အသိ၊ ရှေ့ဆရာနဲ့ ပေါင်းပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားလေ့လာထားဖူးတဲ့ အသိပေါ်ကနေ တက်ကြည့်ခဲ့ကြလို့ အဲဒီအခံနဲ့ ပိုလွယ်လွယ်ကူကူ ဆိုတာမျိုး တွေးခဲ့မိတာကို ဒီ post ဖတ်ရင်း ပြန်သတိရမိတယ်။
အဲဒီ အီးစီဌာနက ဆရာ့အကြောင်း အမှတ်တရ ရေးဦးမယ် စိတ်ကူးမိတာ ခုထိ မရေးဖြစ်သေးဘူး။ ခုကြုံတုန်း သတိရစေတဲ့ post က comment box မှာ အရင် ချရေးထားလိုက်ပါတယ်။
အခုပြောပြသွားတာတင်ကိုပဲ အုပ်တချပ်မက သဲတစ်ပွင့်မက ဖြစ်နေပါပြီ..။ ပညာရေးတွေအကြောင်းကို အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အလျင်းသင့်သလို နောက်ထပ်လည်း ပြောပြပါဦးနော်။
စတီဗင်ဟော့ကင်းကို ကျောင်းမှာ သင်ရတော့ သူ့ဘ၀က တအားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတဲ့ ဆရာက အမြဲပြောတယ်။ သူ့ဘ၀ထက် သူ့စိတ်ထားက ပိုလေးစားစရာကောင်းတယ်တဲ့..။
အခု ဒီပိုစ်ဖတ်ပြီး ပိုပြီးလေ့လာချင်မိတယ်။
ဒါပေါ့သီတာရဲ့ ရေးပြသွားတာလေးကို ကြိုက်တယ်၊ ဒီလို ပို၍ ပို၍ သာ၍ သာ၍ မြင့်သွားရမှာ၊ နောက်လူတွေက ပိုပို တော်သွားရမှာ၊ ခုဖြင့် တို့တွေတောင်ပြန်စဉ်းစားနေတာ...ကိုယ်တွေကရော နောက်လူတွေအတွက် ပခုံးကောင်းခဲ့ရဲ့လားလို့....:)